Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa hidhamtoota siyaasaa Oromoo saddeet irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa hidhamtoota siyaasaa Oromoo saddeet irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa Adoolessa 26, 2013 ooleen, himatamtoota galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa himatamtoota saddeet irratti murtii adabbii waggaa ja’aa hanga ja’aafi walakkaa itti murteessuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tasfaayee Mokonnon Toleeraa OMN-tti himaniiru.
WASHINGTON, DC (voaafaanoroo) --Godinaa Harargee Dhihaa keessatti, Manni Murtii Masalaa kaleessa Sadaasa 21 bara 2016…
Daba : Hidhamtoota siyaasaa Oromoo Awaash turan irraatti dhiibban ga'aa jiraachu himame
Daba: Hidhamtoota siyaasaa Oromoo Awaash turan irraatti dhiibban ga'aa jiraachu himame. Jaal Battee Urgeessaa irraatti…